Vivo V15 Review (Not Pro Version) သင်ဆိုရင် ဝယ်မှာလား - PX
2018 မှာ Vivo Apex နဲ့အတူ Mechanical Slider ကို စမြင်ခဲ့ရတုန်းက ဒီ Hardware ဟာ Vivo High End ဖုန်းတွေအတွက် Exclusive Feature ဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် ၁နှစ်ကျော်ကြာပြီး ခုချိန်မှာတော့ Pop-up Selfie Camera တွေကို Vivo ရဲ့ Mid-range ဖြစ်တဲ့ V Series မှာ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ Review Unit က Pro Version မဟုတ်တဲ့ Vivo V15 မို့ V15 Pro နဲ့ယှဉ်ရင် သူ့မှာ Compromise လုပ်ထားတဲ့အချက်လေးတွေကို Review မှာ ထည့်ပြောပေးသွားပါ့မယ်။
Design ပိုင်းမှာ V15 နဲ့ Pro ကြား အရမ်းကြီးမားတဲ့ကွာခြားမှုမျိုး မတွေ့ရပေမယ့် Pro မှာ အတွေ့များမယ့် Topaz Blue ထက် Glamour Red လို့ခေါ်တဲ့ V15 ဘက်က အနက်နဲ့ ပန်းဆီစပ် Gradient Color ကို Personally ပိုသဘောကျတယ်။ V15 Series မှာ Design ပိုင်းကို Unique ဖြစ်စေတဲ့အဓိကအချက်က သူ့ရဲ့ Camera Box ပါ။ ကျောဘက်ရဲ့ ဘယ်အခြမ်းမှာ Triple Camera Set-up ကို Pop-up Selfie Camera ကို အတွဲလိုက်ဘောင်ခတ်ထားတယ်။ ကျန်တဲ့ကျောဘက် Shape ကတော့ အရင် V Series တွေအတိုင်းပါပဲ။
V15 Series မှာ Glass ဆန်တဲ့ Plastic Body ကို သုံးထားတယ်။ ကိုင်ရတာ သိပ်တော့ စီးစီးပိုင်ပိုင်မဖြစ်သလို မလေး၊ မပေါ့အနေအထားပါ။ ဒီဖုန်းကို စမ်းကြည့်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာ Cover မတပ်ဖြစ်ပေမယ့် ပွန်းစင်းရာထင်တာတော့ မမြင်ခဲ့ရ။ ဖုန်းရဲ့ဘယ်ဘက်မှာ Sim Tray နဲ့အတူ Jovi Assistance Button ကိုတွေ့ရပြီး ညာဘက်မှာတော့ Volume & Power Button တွေပါတယ်။ လူအများစုဟာ ဖုန်းကို အောက်ခြေတစ်ဝက်လောက်က အကိုင်များတာမို့ Button တွေကို လက်လှမ်းမှီအောင် နှိမ့်ပေးထားလေးကိုတော့ ချီးကျူ းချင်တယ်။ Button လေးတွေကလည်း Plastic ဆိုပေမယ့် နှိပ်ရတာ နဲ့မနေပဲ Clicky ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ V15 ကို Body ပိုင်းမှာ Premium မဆန်ပေမယ့် V Series ထုံးစံတိုင်း Design ပိုင်းမှာ Fancy & Unique ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုချင်ပါတယ်။
ဒီဖုန်းရဲ့ Main Selling Point လို့ ဆိုရမယ့်အချက်ပါ။ Camera ကို Mechanical Slider နဲ့ထည့်မြှုပ်ထားပြီဆိုတော့ Full View အရသာကို အပြည့်အဝခံစားရတယ်။ Chin ရှိနေသေးတယ်ဆိုပေမယ့် လက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားပါ။ 6.53″ ကိုမှ 19:9 Ratio ဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ ဂိမ်းဆော့၊ Internet သုံး ဘယ်အချိန်မှာမဆို Display ကို ကြည့်ရတဲ့ Feeling ကိုက အားရစရာပါ။
Pro နဲ့ယှဉ်ရင် Compromise လုပ်ထားတဲ့အချက်အနေနဲ့ သူ့မှာ 1080p LCD Panel ကိုသုံးထားတယ်။ Minimum Brightness ကို အတော်လေးချနိုင်ပေမယ့် Maximum Brightness ကတော့ Mid-range LCD အနေအထားထက်မပို။ နေရောင်အောက်မှာတော့ ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ Display Mode ဘာညာသီးသန့်မပါလို့ သူ့ရဲ့ Punchy ဖြစ်တဲ့ Color အတိုင်းပဲ သုံးရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ Quality အရ ချီးကျူးစရာမရှိသည့်တိုင် FullView Display ရဲ့အရသာက တကယ်သဘောကျစရာ Experience ပါပဲ။
Vivo ရဲ့ FunTouch OS ကတော့ Experience ထက် Interface အသားပေး UI ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ သူ့ရဲ့ Icon အပြင်အဆင်၊ Icon Style နဲ့ Color တွေက User တွေအတွက် Eye Candy ဖြစ်စရာပါ။ iOS မှာလို Control Centre ကြီး အောက်မှာပါပြီး Animation ကလည်း နဲနဲလေးတာကတော့ ဘဝင်မကျစရာ။ ဒါပေမယ့် Bloatware တွေ အတော့်ကိုနည်းတာ၊ Google Service အပြင် System Wide Zawgyi Font မှန်တာ (Chrome ပေါ်မှာလည်း အဆင်ပြေ) ကတော့ တကယ်သဘောကျစရာပါ။ ပြီးတော့ Selfie Camera အဖွင့်၊ အပိတ်အတွက် ရွေးချယ်စရာ အသံ ၃ မျိုးလည်း ပါသေးသဗျ။
သူ့မှာ Dark Mode ပါဝင်လာပြီး Control Centre ကနေ အဖွင့်၊ အပိတ်လုပ်နိုင်တာတွေ့ရတယ်။ Setting ပိုင်းကတော့ အထားအသိုမသေသပ်ဘူးပြောရမလား၊ နဲနဲ ဗျောက်သောက်ဆန်တယ်။ Setting အပေါ်ဘက်က သမရိုးကျ Feature တွေထက် အောက်ဘက်မှာပါတဲ့ Smart နာမည်နဲ့ Tab တွေက ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ဆိုရမှာပါ။
ဥပမာပြောရရင် Smart Motion ရဲ့ Smart Wake ထဲမှာ သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမျိုးစုံသော Gesture Shortcut တွေပါတာ၊ Lock Screen မှာ လက်ကို အောက်က အပေါ် Wave လုပ်ပြီး ဖုန်းကို Unlock လုပ်တဲ့ Air Gesture မျိုး၊ ဖုန်းကို Shake လုပ်ရင် Flashlight On တာမျိုး စတဲ့ Feature တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ UI ပိုင်းအနေနဲ့ Colorful Design, Gesture Feature လေးတွေကြိုက်တတ်သူအတွက်တော့ FunTouch OS က သုံးကောင်းမယ်ဆိုပေမယ့် လိုချင်မိတဲ့ Smooth Animation မျိုးကိုတော့ Personally မခံစားခဲ့ရဘူး ဆိုရမှာပါ။
V15 Pro လို AMOLED Display မဟုတ်တော့ သူ့ရဲ့ Fingerprint ကလည်း ကျောဘက်မှာပဲရှိနေပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ In-Display Fingerprint ထက် Unlock Speed ပိုမြန်တာပါ။ Selfie Camera ကို ညှာချင်လို့လားတော့မသိ၊ သူ့မှာ Face Unlock မပါ။ တခြား Android တွေမှာ မြင်နေကျ Security Feature တစ်ချို့တော့ သူ့မှာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
V15 Pro မှာ Snapdragon 675 သုံးထားရက်နဲ့ V15 မှာ Helio P70 ဆိုတော့ စစချင်းတုန်းက Feel ကျဲမိတာအမှန်။ ဒါပေမယ့် သုံးကြည့်တဲ့အခါ အရင် Helio P60 ထက် အများကြီးပိုအဆင်ပြေတာ တွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် P60 တုန်းက ထစ်နေတဲ့ PUBG HD, High Setting ကို P70 က ကောင်းကောင်း Handle လုပ်နိုင်တယ်။ ဂိမ်းဆော့တဲ့အခါ Antutu မှာ Heat တက်တယ်ပြပေမယ့် Pastic Body ကြောင့်လား၊ Design ကြောင့်လား မပြောတတ်။ ကျောဘက်က နွေးရုံလောက်ပဲ ခံစားရတယ်။ ဒီတော့ Mid-range Level အတွက် V15 ရဲ့ Performance ကို Thumbs up ပါ။
6.5″ Display ကို Handle လုပ်ရတဲ့ သူ့ 4,000 mAh Battery Life က Mid-range မှာ ခံလှတယ်လို့ မဆိုသာ။ 50% Volume & Brightness မှာ 720p Youtube 1 hr ကို 11% နဲ့ 720p Offline Video 1 hr ကိုတော့ 9% လောက်ထိ ကုန်တယ်။ PUBG 1hr ကိုတော့ 20% စွန်းစွန်းပဲကုန်တာမို့ Game ဆော့သူတွေတွက် အားရစရာပါ။ Micro UBS- B သုံးထားသလို သူ့မှာပါတဲ့ Dual Fast Charging ဆိုတာက 18W နဲ့ 10W ကြားပြောင်းပေးတာဆိုတော့ သိပ်အဆန်းကြီးမဟုတ်။ 10% က စသွင်းတဲ့အခါ 1hr မှာ 69% ထိပြည့်ပြီး အားအပြည့်ထိကို 2hr ဝန်းကျင် ကြာပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ V15 ဟာ ကို Gaming အတွက်လည်း စိတ်ချနိုင်သလို Battery Life ကလည်း မဆိုးတဲ့အနေအထားလို့ ဆိုရမှာပါ။
V15 ရဲ့ အားအနည်းဆုံးအပိုင်းကိုပြောပါဆိုရင် သူ့ Speaker ကိုထောက်ပြရပါလိမ့်မယ်။ Single Speaker ဖြစ်တာ အပြစ်မဟုတ်ပေမယ့် Sound Quality က အတော့်ကိုချာပါတယ်။ ပုစဉ်းရင်ကွဲအော်နေသလို ဖျစ်ညှစ်ထုတ်နေပုံ ပေါက်နေတယ်။ ဒီတော့ Speaker လေးနဲ့ သီချင်းဖွင့်မယ်ဆိုတာမျိုးကို ဒီဖုန်းနဲ့ စိတ်ကူးမယဉ်တာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
နားကြပ်ပေါက်ပါသလို Original နားကြပ်ကိုလည်း Out-of-box ထည့်ပေးထားတာ Impressed ဖြစ်မိပေမယ့် Audio အတွက် အပြင်နားကြပ်ကိုပဲ ယူစမ်းဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ Audio Quality ကရော? Speaker က ထွက်တဲ့အသံထက်တော့ အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်။ Mids တွေလှသလို Vocal လည်း မဆိုးဘူးဆိုရမယ်။ Sound Stage တွေကွဲတယ်။ ဒါပေမယ့် Bass ကတော့ ပုံမှန်ထက် ဝိတယ်။ ဒါက ဘာ Equalizer မှမဖွင့်တဲ့ အနေအထားပါ။
သူ့မှာ Deep Space Sound Effect တွေပါပေမယ့် သူ့ရဲ့ Mode ၃ မျိုးစလုံးက ဘယ်လိုမှနားထောင်ရအဆင်မပြေတဲ့အနေအထား။ Equalizer မှာလည်း သူ့ Original ပါတဲ့ Mode တွေက နားထောင်ရ Balance မညီ။ ဆိုတော့ V15 ရဲ့ အကောင်းဆုံး Sound Quality ကိုရချင်ရင်တော့ Equalizer ကို ကိုယ်တိုင်ကလိမှ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်ရှုပ်မခံချင်ရင်၊ ကိုယ်သုံးနေတဲ့နားကြပ်ကိုလည်း ယုံရင်တော့ Headphone Adaptation ထဲက Vivo XE1000 ကို ရွေးနားထောင်ပါလေ။
Vivo က သူ့ရဲ့ V15 Pro မှာ 48MP သုံးပေးထားပေမယ့် V15 ကိုတော့ 12MP နဲ့ ဝိတ်လျှော့ထားတာတွေ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် Image Quality ပိုင်းအရတော့ မဆိုးဘူးပြောနိုင်တဲ့အနေအထားပါ။ သူ့မှာသိသိသာသာကောင်းတဲ့အချက်က Dynamic Range လို့ ဆိုရမယ်။ Color တွေက နဲနဲ Punchy ဖြစ်ပေမယ့် လက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထား။ ရလာတဲ့ပုံတွေကတော့ Zoom ဆွဲသိပ်မခံတာ တွေ့ရတယ်။
သူ့ရဲ့ 8MP Ultra-wide က အလင်းရောင်ကောင်းသရွေ့ မဆိုးတဲ့အထဲတော့ပါတယ်။ Dynamic Range နဲ့ Detail က Main Camera လောက်မကောင်း။ သူ့မှာ 5MP Depth Sensor ပါပေမယ့် လူမဟုတ်တဲ့ တခြား Object တွေကိုရိုက်ရင် Portrait Mode က အတော်လေးအဆင်မပြေ။ လူကိုရိုက်ရင်တော့ Edge Detection ပိုင်းက အဆိုးကြီးမဟုတ်တောင် လက်ခံနိုင်တဲ့ အနေအထားရှိပါတယ်။
သူ့မှာ V15 Pro လို Night Mode ဘာညာမပါလို့ Low Light Photo Quality ကတော့ သာမန် Mid-range ဖုန်းတစ်လုံးထက်မပိုပါဘူး။ Autofocus နဲ့ Noise Reduction ပိုင်း တိုးတက်လာတာကတော့ ချီးကျူးစရာပါ။ Ultra-wide Lens ကိုတော့ Low Light မှာမသုံးတာ ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
32MP Selfie Camera က ဒီဖုန်းရဲ့ နောက်ထပ် Selling Point တစ်ခုလို့ ဆိုရမှာပေါ့။ Image Quality အနေနဲ့ အတော်လေးမိုက်ပေမယ့် Indoor မှာတောင် Background Noise က ထလွယ်တယ်။Detail ပိုင်းမှာတော့ အဆင်ပြေပေမယ့် Artificial ဆန်တယ်။ ဒါပေမယ့် မျက်နှာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကို မရိုက်ခင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ခွင့်ပေးတဲ့ AI Beauty Mode က Selfie အရိုက်များတဲ့သူတွေကို မိတ်ကပ်မလိမ်းပဲတောင် လှပနေစေမှာပါ။
Video ပိုင်းမှာတော့ Back Camera ကို 1080p, 60fps နဲ့ Maximum ရိုက်နိုင်တယ်။ သတိထားမိတာက Ultra Wide Mode ကို 30fps နဲ့ပဲရိုက်နိုင်တာ၊ ပြီးတော့ ရိုက်နေတုန်း Camera Switch လို့မရတာ။ EIS Support က 720p မှာပဲပေးတယ်။ ဆိုတော့က 1080p Footage တွေက Ultra-wide နဲ့ရိုက်ရင် ပိုငြိမ်ပါလိမ့်မယ်။ Selfie Camera မှာလည်း 1080p ထိရိုက်နိုင်မယ်။ ဒီတော့ Live လွှင့်ဘာညာလောက်ဆို အဆင်ပြေမှာပါ။
ဒီတော့ Vivo V15 Pro ရှိနေရက်နဲ့ ဘယ်အချက်တွေကြောင့် V15 ကို ရွေးချယ်သင့်မလဲ? ပထမတစ်ချက်က ဈေးပါ။ ဒီဖုန်းနှစ်လုံးကြား ဈေးကွာခြားချက်က အနည်းဆုံး ၁ သိန်းလောက် သေချာပေါက်သွားမှာပါ။ (ဈေးအတိအကျမသိရသေးပေမယ့်) ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အနီရောင် Color ကလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိသလို Selfie အသားပေး၊ Full Screen Display ကို Battery များများနဲ့ မက်သူတွေအတွက်ကတော့ ၄သိန်းခွဲနဲ့ ၅ သိန်းကြားဈေးတန်းမှာ Vivo V15 က ရွေးချယ်ချင်စရာဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။